Su'aal: Markaan hurdayo horey kama seexdo?
Author Topic: Su'aal: Markaan hurdayo horey kama seexdo? (Read 987 times)
« on: June 02, 2017, 10:47:17 AM »
Dr, Asc ugu horreyn, waan kaaga mahad celinayaa sida naxariista badan aad noo caawisid mar walba.
ilaah hakaa abaalmariyo.
Dr su'ashaydu haddii aan u gudbo, markaan hurdayo horey kama seexdo ilaaa aan soo xisaaabo wixi aan soo maray maalintaas oo ficil ah sameey. tankale dabeecadaasi weligay ban ahaa tusaale:
waxan seexday 9:00pm habeenimo waxa lagayaaba in aan ku garo 4:00pm . markaan is iraahdo bal halkaan ku jooji oo nafteyda ku canaanto waxan arkayaa indhal'ah anigo bartiga uga jiro barnaamijka.
waxa kaloo jira markan saas u fakiraya waxii maskaxda iiga jiray baan arkayaa mowluuc hor leh sidaas u sii muhiimsanayn ban iska dabadhigtaa kabacdi dib ayan usoo kala wareegaya kii awal oo ii ahaa muhiimada lahaa ban u solabta kadib waxa dhacdaa in uu iga yara qasmo yacni ilaawo kadib , waxan kasoo bilaabayaa min awal ilaa an ku keeno mesha xasusta ii jogtay islamarkas warka ii maraay.
intas kadib , waxan is arkaa anigooo hurdo la dhacay yacni madareemayo xiliga jirkayga itusayo in hurdaysanahay . lkn hadii aan daalanahay waxas majiraan in maskaxda kusoo celceliyo dr bal ila arag warkaan ma dadka dhan mise aniga ii gaar?
Re: Su'aal: Markaan hurdayo horey kama seexdo?
« Reply #1 on: January 10, 2018, 07:55:28 PM »
In hurdada ay kaa soo dhici wayso oo maskaxdaadu mashquul noqonayso waa qeyb ka mid ah hurdo la'aanta, akhriso qoraalkaan, raacne talooyinka ku xusan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=2045.0
« Reply #2 on: January 10, 2018, 10:03:34 PM »
Jzkllh, wan grty jawaabtada adna ilaah haku xafido adduun iyo aakhiro.
Views: 1820 October 05, 2015, 11:40:31 AM
Views: 5709 September 04, 2016, 07:49:05 PM
Views: 21339 March 07, 2011, 05:28:58 PM
Views: 83025 May 16, 2010, 09:57:56 PM
Views: 2280 February 12, 2016, 08:11:39 PM